सरकार मलाई किन झुक्यायौ?
On: २०७७ जेष्ठ ३२ गते, आईतवार, ०५:२१ बजे प्रकाशित
फलामे ढोका मानिदै आएको एसईई यो वर्ष नहुने रे! वर्तमान समयमा हरेक अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूको लागि शिक्षाप्रतिको चासो, झुकाव, महत्व र लगानी बढिरहेको छ।
बाबुआमाले तोते बोली बोल्दादेखि नै थुप्रै आशा र अपेक्षाका साथ आफ्ना सन्तानहरूलाई स्कुल भर्ना गर्छन्। उनीहरूले लगभग एघारदेखि चौध वर्षसम्म आ–आफ्नो हैसियत अनुसार शिक्षामा लगानी गर्छन, केवल एक आशामा मेरा छोराछोरीले राम्रो नतिजा ल्याई एसईई पास गरून् र उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर शिक्षित नागरिक बन्न सकुन् र राष्ट्र निर्माणमा सहभागी होउन्।
विद्यार्थीहरू पनि आफ्नो र बाबुआमाले देखेका र बुनेका सपनाहरुलाई यथार्थतामा परिणत गर्न बडो मेहनेत गर्छन्। तर विडम्बना यो कुरा शिक्षाका नीति निर्माता, आधिकारिक निकाय र सत्तासीन सरकारी निकायहरूले न त बुझ्नु भयो न त बुझ्नका लागि नै कोशिश गर्नुभयो। यस बर्ष पनि ४,८२,७०७ विद्यार्थीहरूले एसईई परीक्षाको तयारीमा लागि रहेका थिए।
कक्षा दशको पहिलो दिनदेखि नै टुप्पी कसेर पढ्ने हजारौँ थिए। हो त्यही बिचमा पर्छिन् कर्णालीकी मिना। निम्न वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर घाँस, दाउरा, मेलापात र रुढीवादी समाजसँगै उनी फलामे ढोकासम्म बल्लबल्ल आइ पुगिन्। सानैदेखि असल शिक्षित व्यक्ति बन्छु, अनि समाज परिवर्तन गराउँछु भन्ने सोचकी उनी आज सरकारको जनताप्रतिको जवाफदेहिता र गैरजिम्मेवारी देखेर दिक्क, चिन्तित र निराश छिन्।
यस वर्षको एसईई परीक्षा चैत्र ६ गतेबाट सुरु हुने घोषणा भैसकेपछि परीक्षा केन्द्रहरू तोकिए। मिनाको केन्द्र भने घरबाट निकै टाढा पर्यो। त्यसैले मिनाका बाबाले गाउँघरमा बनिबुतो गरको केही रुपैयाँ र सहकारीबाट ऋण खोजेर जसोतसो परीक्षा दिनको लागि केन्द्र नजिकै बसोबासको ब्यवस्था मिलाई दिनुभयो।
एकातिर घर परिवारबाट टाढा, खल्तीमा सुको पैसा नहुनु तर आमाले दिनु भएको मकै र भटमासले पेट भर्ने आशा, नौलो ठाउँ, नयाँ परिवेश र नचिनेका मानिसहरू बिचमा डर, भय आदिको बिचमा सुनी तड्पी रहेकी थिइन् भने अर्कातर्फ एसईई दिएर उतिर्ण गर्ने भरोशाका साथ मिना उज्ज्वल भविष्यको सपना संगालेर एसईई तयारी गरिरहेकी थिइन्।
उनको सपना त्यतिखेर चकनाचूर भयो जब चैत्र ५ गते साझ नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले एसईई स्थगित भनेर सूचना जारि गर्यो। उनी र उनको परिबारलाइ छानाबाट खसेको जस्तो लाग्यो। स्थगित भयको हो तर रद्द भएको होइन भनेर उनी घर फर्किन्।
चिनबाट फैलिएको कोरोना महामारीले गर्दा सरकार यो निर्णयमा पुग्यो। तर, पनि परीक्षा समय र परिस्थिति अनुसार लिइनेछ भन्ने सरकारको भनाइले उनी आफ्नो अध्यायनमा लागि रहिन। लकडाउनले घरमा पेट पाल्न गार्हो भएको बेलामा पनि मनोबल उच्च राखेर आफ्नो पढ़ाइमा लागिरहिन्।
वर्ष दिनको बचतबाट किनेको रेडियोमा कान थापेर सुन्दा एसईई हुने खबरले मिना र उनको परिबारमा फेरी आशाको दिप पलाउथ्यो। त्यो दिप पनि निभाइयो यो वर्षको एसईई रद्द गरेर। कोरोनाको त्रास बढेपछी चैत्र ५ भित्र परीक्षाहरु सबै सक्नुपर्ने सूचना जारी गरेर शिक्षा मन्त्रालयले एसईई पनि परीक्षा नै हो भन्ने कुरा बिर्सनु पो भयो कि? पटक पटक बिधार्थीहरुलाई झुक्काईएको मिनाले अनुभव गरिन्।
कहिले विदेशीको निर्देशनमा निति नियम बनाएर, कहिले शिक्षामा दिएका अनुदान लुकाएर त कहिले बिद्यालय शिक्षालाई राजनीतिक मैदान बनाएर, कहिले शिक्षालाइ ब्यापारीकरण गरेर जनतालाई झुक्काई रहेको सरकारले यो वर्ष भने मिना जस्तै लाखौ हामीलाई बारम्बार एसईई परीक्षा हुन्छ हुन्छ भन्दै अन्तिममा रद्द गरेर झुक्काउनु झुक्कायौ सरकार? अब त तिमीप्रति झिनो आशा र बिश्वाश पनि मरी सक्यो।
२०७७ जेष्ठ ३२ गते, आईतवार, ०५:२१ बजे प्रकाशित